Who were Bengali, so called Rohingya?: BBC တော်လှန်ရေး သို့မဟုတ် Exile များ၏ မျက်နှာဖုံးကွာကျခြင်း (ငမွဲများ အသဲနာခြင်း)
အခုဖြစ်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဘယ်သူမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ တစ်ပုံတစ်ခေါင်းကြီးကို တွေ့လာရပါတယ်။ အတိုက်အခံဆိုတဲ့သူတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေ၊ မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဌာနတွေ၊ ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မီဒီယာကြီးရဲ့ တာဝန်မဲ့ မလေးမစားနိုင်မှုတွေ၊ သတင်းဌာနအခြင်းခြင်း ဖေးမမှုတွေကို အတိုင်းသား တွေ့ရမှာပါပဲ။ ပြဿနာအစကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း BBC ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့မလိုက်ဖက်ပဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ မြေပုံက စ ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ တစ်ချို့တွေက မေးလာကြတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးက ရေးထားတာ ကြာလှပီ ဘာလို့ အခုမှ အရေးတယူလုပ်လဲလို့ မေးလာပါတယ်။
ခုဏက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စဖြစ်လာတော့ လူတွေက အစိုးရရဲ့ ဆိုက်ဝါးကို သတိထား၊ အစိုးရလမ်းကြောင်း လွှဲတာကို မြောပါမသွားစေနဲ့လို့ ပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ကျွန်တော့အနေနဲ့ ထောက်ပြစရာတွေ အများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီကိစ္စ စဖြစ်တာ ဘီဘီစီနဲ့ပါ။ ဘီဘီစီက ပြည်သူတွေဆန္ဒကို လုံးဝဂရုမစိုက်ပဲ မြေပုံပြန်ပြင်တယ် ရှေ့နောက်မညီတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ ထုတ်ပီးတော့ သူ့ပရိတ်သတ်တွေကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံကြောင့် ကန့်ကွက်တဲ့လူတွေ တော်တော် စိတ်ဆိုးပြီး ပိုပြင်းထန်လာပါတယ်။ မီဒီယာတွေရဲ့ ဖေ့ဘွတ် ပေ့ခ်ျမှာ သွားရေးကြတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ Exile မီဒီယာရဲ့ အယ်ဒီတာတွေစီမှာ သွားရေးကြတယ်။ ဘာဖြစ်သလဲ ဖျက်ပစ်ကြပါတယ်ဗျာ။ ခါတော်မှီ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ရစေဖို့ အပြည့်အ၀ အာမခံပါတယ်ဆိုပီး ကြွေးကျော်လာတဲ့ Blog မှာတောင် မှတ်ချက်ကို ဖျက်ပစ်တဲ့အပြင် ထပ်ရေးမှာစိုးလို့ မှတ်ချက်ရေးသူကို ဘလော့တယ်ဗျ။
အဲ့ဒိမှာ တစ်ချို့တွေက အားကိုးတကြီး ဒီကိစ္စကို DVB ကိုပြောမယ် DVB ဆိုရင်တော့ ငါတို့ဘက်ပါမှာပဲ အဲ့ကြရင် BBC တော့နာမှာပဲ ဆိုပီး အားကိုးတကြီး DVB ကိုသွားပြောကြတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးများ ဘယ်လောက်တောင် ယုံကြည်ကိုးစားကြသလဲဆိုရင် DVB, RFA, VOA, Mizzima, Irrawaddy အကုန်လုံးလိုလိုကို ဒီကိစ္စ စော်ကားခံရတာ မကျေနပ်ဘူးလို့ သွားပြောလိုက်ကြတာ သတင်းဌာန တစ်ခုခုကများ ငါတို့ဘက်ရပ်တည်လေမလား ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလဲ သူတို့မှာ မချိတင်ကဲနဲ့ကို လာမေးကြတယ်။ ဘာဖြစ်လဲ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ရှိရှိသမျှ သတင်းဌာန နှာစေးနေတော်မူပါတယ်။ နောက်ဆုံး အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့၊ မြန်မာ့အရေး ကျွမ်းကျင်သူများလို့ ကိုယ့်ကို နာမည်တပ်ထားခဲ့တဲ့ သူတွေလည်း ပါတ်တော ပိတ်ကုန်တော့တာပါပဲ။ အရင်တုန်းက အဖေ့ဘုတ်မှာ Custom Message တင်တာကိုတောင် သတင်းလုပ်ရေးတဲ့ Irrawaddy Blog လည်း ဒီသတင်းကို အရှင်းတောင် မဟပါဘူး။
ပြည်သူတွေ မကျေနပ်ချက်တွေ ပေါက်ကွဲလာတဲ့အချိန်မှာ အရင်တုန်းက Irrawaddy နဲ့ DVB သတင်းဌာနတွေရဲ့ ယခင်က တင်ထားခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အကြောင်းတွေ ပြန်ပြန့်လာပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်တာလား တမင်ရွဲ့တာလား မသိပေမဲ့ အကုန်လုံး ဒေါသတချောင်းချောင်း ထွက်လာကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အစိုးရ ၀ါဒဖြန့်တဲ့ ဆိုက်ဝါးထဲမှာ မြောနေတယ်လို့ ကျွန်တော့ကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေကို ထောက်ပြချင်လာတာက အခုလို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ဘူးတဲ့ နာမည်ကြီး မီဒီယာကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘီဘီစီကို ဖေ့ဘွတ်ကနေ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ တစ်ခဲနက် ၀ိုင်းပြီး ကန့်ကွက်ကြတာကို ကျန်တဲ့မီဒီယာတွေ နှုတ်ဆိတ်နေတာကိုပါပဲ။ မဇ္ဇိမ သတင်းအယ်ဒီတာကြီး ဦးစိန်ဝင်းပြောခဲ့တယ် ဒီကိစ္စဟာ သိမ်မွေ့တဲ့ကိစ္စမို့လို့ ကျွန်တော် နှာစေးနေကြောင်းတဲ့။ ကဲ နောက်ဆုံး ဘာသာရေး လူမှုရေး မပါတ်သက်ချင်ရင်တောင် ပြည်သူတွေ အခုလို ဆန္ဒပြနေပါတယ်ဆိုတာကိုတောင် သတင်းလေးအဖြစ်တောင် မရေးရဲကြအောင် အားလုံး တိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။ မထူးဆန်းဘူးလား၊ BBC, VOA, RFA, DVB, Mizzima, Irrawaddy ရှိရှိသမျှ Exile Media တွေအားလုံးဟာ အစိုးရရဲ့ ပိုက်ဆံရထားလို့များ နှုတ်ပိတ်နေကြတာလား.. နဂိုကမှ အစိုးရဆို မှိုချိုးမျှစ်ချိုး ပြောချင်ကြတဲ့ ဒီ မီဒီယာတွေဟာ ဒါတကယ့်အကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဝေဖန်ပါလား မဝေဖန်ရဲခဲ့ကြသလို နှုတ်ပိတ်ပြီး ခတ်ဆိပ်ဆိပ်ပဲ နေကြပါတယ်။
မနေနိုင်တဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်တစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့်မျက်နှာဖုံး ကိုယ်ဖွင့်ပီးတော့ ဘီလူးဆိုင်းနဲ့ ထွက်လာတယ်။ စေတနာမမှန် ဒေါ်လာအကျိုး မျှော်ကိုးပီ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ ထွက်လာလေတော့ သူလည်း တစ်ခါတည်း ကားယားကြတာပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာ သူ့နာမည် တန်းပြီးတော့ကို သေ သွားတော့တာပါပဲ။ ကျန်တဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာလည်း ဗူးပေါ်သလို ပေါ်လာတော့တာပါပဲ။ သူတို့ တောက်လျှောက် ဖုန်းကွယ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်အသင်း ရဲ့ အာရကန်ကို ဆန္ဒပြတာတွေဟာလည်း အခုမှ လူတွေကြားထဲ ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။
ပထမဆုံး ထောက်ပြချင်တာကတော့ ရခိုင်မှာ နစက နှစ်ယောက် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စ။ အဲ့ဒိသတင်းကို Exile Media တွေလုံးဝ နှာစေးနေတယ် မထုတ်လွှင့်ဘူး။ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တောတွေ လုပ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှု မှန်သမျှ တစ်ခုမှကို မဖော်ပြဘူး။ ဒါတွေဟာ ရိုးသားမှု ရှိခဲ့ပါသလား။ နောက်တစ်ခုက ဘင်္ဂါလီတွေ တရားမ၀င်နည်းလမ်းနဲ့ ရန်ကုန်ကို လာကြတဲ့ကိစ္စ။ ဘင်္ဂါလီတစ်ယောက်ဟာ ရန်ကုန်ကို လာချင်ရင် နစက ကို 15 သိန်းပေးရပါတယ်။ နစက ရဲ့ စစ်ကားတွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကို သယ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် လမ်းမှာ အတားအဆီးလွတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နစက ရဲ့ အကြီးအကျယ် ခြစားတဲ့ အမှုပါ။ ကျွန်တော်တို့လို ပမွှားတွေတောင် သိမှတော့ မြန်မာပြည်မှာ အပ်ပျောက်၊ ဖိနပ်ပျောက်တာတောင် အတိအကျ သိကြတဲ့ Exile Media တွေ နှုတ်ဆိတ်နေကြတပါတယ်။ သူတို့ ဘာလို့မအော်ရဲကြသလဲ အဖြေက ရှင်းပါတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာ နစက ကိုအရေးယူလိုက်ရင် ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ရန်ကုန်ကိုလာမယ့် လမ်းကြောင်းပျောက်သွားရင် သူတို့နောက်ကွယ်က ပံ့ပိုးနေတဲ့ သူတွေ သူတို့ကို ထုမှာစိုးလို့လို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
ဘူးသီးတောင် မောင်းတောက အမတ်နှစ်ယောက် မတရားနည်းလမ်းနဲ့ အမတ်ဖြစ်လာတယ်။ စစ်အစိုးရဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး မဲခိုးတယ် ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဆိုပီး ကြွေးကျော်လာကြတဲ့ Exile Media တွေ ဒါကို ပါးစပ်ပိတ်ထားကြတယ်။ ရခိုင်အမတ်တွေ ကန့်ကွက်တာတောင် သူတို့စာမျက်နှာတွေပေါ် မတင်ခဲ့ဘူး။ ဟောအခုတော့ အစိုးရက စိစစ်တွေ့တော့ အဲ့ဒိအမတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့မအော်ပါဘူး။ ဒီအမတ်တွေကို ဘာလို့ အစက လက်ခံခဲ့သလဲ၊ အခုဘာလို့ထုတ်လဲ၊ လိမ်လည်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘယ်လိုအရေးယူသင့်သလဲ စသည်စသည် တကယ်အော်မယ်ဆို အကြောင်းခြင်းရာတွေ ပြည့်လို့ ဒါပေမဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ သူတို့တွေ ကြမ္မာငင်တော့တာပါပဲ။ ပြည်သူတွေအတွက် စစ်မှန်သော အသံဖြစ်ရပါမယ်လို့ ကြွေးကျော်ခဲ့တဲ့ သူတို့ကို ပြည်သူတွေက ပြန်မေးနေကြချိန်မှာတော့ ရင်မဆိုင်ရဲတော့ပဲ မေးခွန်းတွေကိုသာ တွင်တွင်ဖျက်နေ ပါတော့တယ်။
သူတို့ဟာ အစိုးရရဲ့ မကောင်းကြောင်းကို ဝေဖန်ချင်တာတောင်မှ ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်မယ်ဆိုရင် တုတ်တုတ်ကို မလှုပ်ရဲတာ တအားသိသာလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းကျွတ်မှာ အစိုးရက အကျဉ်းသားတွေ တစ်ပြုံကြီး လွှတ်တဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေ လက်စောင်းထက်တာကို သူတို့ဟာ ထိုင်ငေးနေရုံသာ တတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ပြောစရာရှိတာက Exile Media တွေရဲ့ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိ ပြည်တွင်း သတင်းထောက်တွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲက နာမည်ကြီး ဂျာနယ်တစ်ချို့ရဲ့ သတင်းထောက်တွေလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့လည်း Exile Media တွေမှာ မထင်မရှား နာမည်ဝှက်တွေနဲ့ သတင်းရေးနေရတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွား သတင်းရေးချင်မှာပါပဲ။ အခုလို စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်တွေ တဖြည်းဖြည်းရလာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းကို ဦးစားပေး ဇောင်းပေး သတင်းပို့လာတဲ့ သတင်းထောက်တွေကြောင့် ပြည်ပ မီဒီယာတွေ သတင်းရှားလာတာလည်း တဖြည်းဖြည်းပေါ်လွင်လာပါတယ်။
ကျွန်တော် သတိထားပြီး ကြည့်နေတယ် ဒေါ်စုနဲ့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု စတင်ကတည်းက ပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေ ထိုင်သွားကြပါတယ်။ တော်တော်လေးကို သတင်းတွေ ရှားပါးလာတယ်။ အခု လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ လက်စောင်း ထက်လာမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာဟာ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာရာမှာ အခု ဘင်္ဂါလီနဲ့ ဘီဘီစီ ကိစ္စပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကို ကျလာပါတော့တယ်။ သူတို့တွေ နာမည်သေကုန်ကြပါပီ။ ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ပျက်မှုကို တော်တော်လေးကို ရသွားကြပါပီ။ ကိုချိုတူးဇော် ပြောသလိုပါပဲ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဂရုမစိုက်သော အစိုးရနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို မလေးစားသော သတင်းဌာနတွေဟာ ရေရှည်မခံဘူးဆိုတာ တဖြည်းဖြည်း မှန်လာပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းဌာနတွေ အနေနဲ့လည်း မြန်မာပြည်သူတွေ ရှိနေလို့ လုပ်စားရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာပြည်သူတွေ ရွံ့မုန်းသွားခဲ့တဲ့ နောက်တော့ သူတို့ရဲ့ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ထောက်ပံ့ငွေတွေ ဖြတ်တောက်ခံရရင် သူတို့အလုပ်ပြုတ်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း မေ့နေကြပုံရပါတယ်။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ကတော့ ဘီဘီစီနဲ့ ဘင်္ဂါလီ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ အမြတ်ထွက်သွားကြတာကတော့ အစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်ပါလားဆိုတာကို လူတွေ ပိုသိသွားကြတယ်၊ အတိုက်အခံ သတင်းမီဒီယာတွေ မျက်နှာဖုံးကွာကျကုန်တယ်၊ အရှက်ကွဲကုန်တယ်၊ ပြည်သူတွေ အယုံအကြည်မဲ့သွားတယ်။ ကဲ ငါတို့မပြောဘူးလား ဘီဘီစီ လိမ်နေသည်၊ ဗီအိုအေ ညာနေသည်၊ RFA, DVB လေလှိုင်းသံ အကောက်ကြံ ဘာညာတွေဗျာ ဆိုပီးတော့ စင်ပေါ်ကနေ မိန့်မိန့်ကြီး ကျုပ်တို့ကို ထိုင်ကြည့်နေမှာ မြင်ယောင်တယ်။ အစိုးရကို ကြည့်မရတဲ့ ကျုပ်တို့ဟာ နေရင်းထိုင်ရင်းကို အစိုးရရဲ့ ပဉ္စမံ တပ်သားတွေအနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ မျက်နှာဖုံးကို ခွာချပေးလိုက်တယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေကို လေးစားခဲ့မိတဲ့ ကျုပ်တို့ကိုယ် ကျုပ်တို့ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အားကိုကိုးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ကျုပ်တို့တွေလည်း ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်းကို သိသွားတော့တာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လျှောက်မယ့်လမ်းကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ သဘောပေါက်သွားတဲ့ ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့ အမျိုးသားအရေးထက် ဒေါ်လာအရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေရဲ့ ခင်ဗျားတို့ နာမည်တွေ သမိုင်းမှတ်တိုင်တွေ သေသွားပီဗျာ... တော်ပီ ရေးလေ ရေးလေ ရင်ထုမနာလေပဲ.... အစိုးရပြုံးပြုံးကြီး ကျုပ်တို့ကို ကောင်လေးတွေ ငါတို့ကိုယ်စား ဆော်တာ တော်သဟဆိုပီး ကျောကုန်းကို ဟိုသတ္တ၀ါကို ပွတ်သလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေမှာကို အသဲအနာဆုံးပဲ.....
By James Mmt on Saturday, November 5, 2011 at 6:51pm
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 7:43 PM
Labels: သတင်း, ဆောင်းပါး, ပေးစာ
I was born and brought up in Arakan State. During my presence there till3years ago, i have never heard of this term ' Rohingya' both from the mouth of local Rakhine and Bangli Muslim immigrants. Besides, being interested in history, i am always in touch with the history of Burma and Arakan. But, i have never found this term ' Rohingya'. Only after i left for overseaafew years ago, i found myself familiar with this term from internet. Really, this is dangerous and severe mistake done by some famous news agency like BBC. What the worse is that others agencies such as VOA, DVB, Irrawaddy, etc. are keeping silent as if it is not their concern.
အမှန်တစ်ကယ်တော့ ဒေါက်တာဇာနည်က လူလည်ပါ ... ဘင်လီတွေဘက်ကလိုက်ရေးပေးလို. သူတန်ဖိုးကြီးကြီးပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာသူသိပြီးသားပါ ... ဒါပေမယ့်လည်းအာရပ်မွတ်ဆလင်တွေဆီကရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စအတွက်ပေးတဲ့ စတာလင်ပေါင်သန်းချီရှိတဲ့ တွေကိုယူမိရက်သားဖြစ်နေပါပြီ ... ဒီအာရပ်ကုလာတွေဆီက မသမာတဲ့ငွေတွေကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာ Dr Zarni တို. Burma Campaign UK တို.ဟာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ပတ်သတ်မှုရှိနေပါတယ် ... အခုကစ္စကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုက ပြည်ပရောက်အတိုက်ခံဆိုတဲ့သူတွေကိုလုံးဝယုံကြည်မှုမရှိတော့ပါ ... ကျွန်တော်တို. သူတို.တွေကိုအားကိုးလို.မရပါ ... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသားဝန်းရံကြဖို.ပဲရှိပါသည် ..
ဒေါ်စုကော ဘယ်လိုလဲ ရင်တဖိုဖိုနဲကစောင့်ကြည့်နေမိပါတယ်။ လေးစားအားကျခဲ့ရတဲ့ Eleven Media Grup ကြီးကော။ ကျွန်တော်ရင်ဖိုနေမိတယ်။ သူတို့တွေ ဒီတချိန်လဲ တကယ့် ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေဖြစ်ပါစေ။ ဒါဟာမှတ်ကျောက်တခုလို့ထင်ပါတယ်။ တပြည်လုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော် ဒီက ပို့စ်တွေကို facebook ပေါ်ရှယ်သွားပါတယ် ခွင့် မတောင်းဘဲနဲ့ ယူသွားတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်...
ခုချိန်မှာ လုပ်ပေးနိုင်တာက ဒါပဲ ရှိတယ်လို့ ထင်တယ်... ကျွန်တော့် အခြေအနေက..
မဆီမဆိုင်ရခိုင်တွေကိုဝင်ဖဲ့ သွားတာဘယ်ကလရူးလဲ။ ရိုင်းစိုင်းတယ်လို့ပြောရအောင်ဘာလုပ်နေလို့လည်း။ ကိုယ်ပါကိုယ်အေးဆေးနေတတ်တဲ့ အမျိုးကွ။ မဟုတ်မခံတွေကွ။
ဒေါ်စုကတော့ နိုဗယ်ဆုပေးထားတဲ့ မျက်နှာထောက်ပြီး မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ် BBC ဆိုတာကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ခေတ်ထဲက ဒီလိုပဲ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ၀ါဒဖြန့် လက်နက်ပါ ဆိုက်ဝါးပေါ့ BBC အကြောင်းခုမှသိတယ်ပေါ့လေ ငပိန်းတွေ သန်းရွှေလည်း မကောင်းဘူး ဒေါ်စုလည်း ရေငုံနေတယ် ၈၈ မျိုးဆက်တွေဆိုတာကလည်း သူ့ အကြောင်းနဲ့သူ အားကိုးစရာကို မရှိဘူး ဒေါ်စု အမတ်ဖြစ်တော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးတော့မယ်ထင်တာ ခုတော့ တော်ပြီကွာ ဆဲမိတော့မယ် ငါထိုင်းမှာနေတယ် ပြည်ပရောက် နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာ ဘာမှမထူးဘူး ပြည်တွင်းက ဗိုလ်မှူးသတောင်းစားတွေလိုပဲ
"မလုပ်ခင်စဉ်းစား ဖြစ်လာရင်တော့ အပစ်တင်မရ
သူအဖေ သူ့နှမ သူအမေကစ ဂျူးများရက်စက် သွေးစက်လက်ကိုမြင်တော့
နာချင်းမကနာ ရင်မှာကြာတော့ အမုန်းကိုသဋ္ဒေတည် ဖြည်မရတဲ့ဂလဲ့စားနဲ့ဆက်ခါဆက်ခါ
ယခုဖြစ်နေတာတွေကို ပြန်လည်သုံးသက်ပါ တစ်ချိန်က ရခိုင်တွေက ကုလားတွေကို နှိပ်ဆက်လယ်တွေသိမ်း လုပ်ပြီး အခုဒီမိုကရေဆီရလာပြီး ဆိုတော့ သူတို့အလှဲ့ပြန်ခံရမှာ တရားဆွဲခံရမှာကြောက်ပြီ တို့ဗမာတွေကိုအသုံးချဖို့ကြိုးစားနေတာ တို့ဗမာတွေနားလည်ဖိုကောင်းပြီ
ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကြိုးဆက်ကတော့ မြန်မာပြည်ရော ဗမာတစ်မျိုးသားလုံးပါ
Some Burmese were side of Muslims. Take cake!